Xildhibaan ka tirsanaa Golaha Shacabka oo si kedis ah maanta ugu geeriyooday Muqdisho – Kalfadhi
Alle ha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), oo ka tirsanaa Golaha Shacabka ee BFS. Geerida Xildhibaanka waxaa Kalfadhi u xaqiijiyey Xildhibaano kale oo ay ka wada tirsanaayeen Golaha Shacabka.
Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan (Cali Ganeey), oo ay qaraabo dhaw ahaayeen Korneel Ruush, ayaa ka mid ahaa Xildhibaannada Kalfadhi u xaqiijiyey geerida Xildhibaan Korneel Ruush. “Alle ha u naxariisto, goordhaw ayuu geeriyooday Xildhibaan Ruush. Xanuun deg deg ah oo dhinaca wadanaha ah ayuu u dhintay” ayuu Xildhibaan Cali Ganey ku yiri Kalfadhi.
Sidoo kale Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan waxa uu Kalfadhi u sheegay in marxuumka dhintay uu Baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa tan iyo sanadkii 2012-kii, islamarkaana uu ahaa nin wadani ah oo dulqaad badnaa. “waxaan iskala tirsaneen Baarlamaanka Soomaaliya ilaa Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu ahaa wadani, aad u jecel dalkiisa iyo dadkiisa” ayuu yiri Xildhibaan Cali Geneey.
Marxuumka dhintay ayaa sidoo kale ka tirsanaa Ciidamada Milatariga Soomaaliya, xiligii Dowladdii Dhexe ee Militariga ahayd, waxa uuna ka gaaray darajada Korneel oo ah tan uu naaneesteeda ku qaatay. Sidoo kale, waxa uu ahaa aqoonyahan muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya.
“Markii ay dalka ka talin jirtay Dowladii Milatariga, waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dalka, kadibna waxa uu sidoo kale qabtay xilal kale oo muhiim ah, galabta ayuuna istaagga ka dhacay, waxa uuna ku dhintay Isbitaalka Digfeer” ayuu markale Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan ku yiri Kalfadhi.
Marxuum Axmed Mayow Cabdulle ayaa ka tagay Carruur badan, waxa uuna soo guursaday dhawr xaas. Waxa uu ka mid ahaa Xildhibaannada aan aadka uga dhax muuqan warbaahinta. Sidoo kale, waxaa la sheegaa in uusan ka soo dhex muuqan jirin xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan mowjadaha siyaasadeed ee waqtiyada qaar ka dhex qarxa Golaha Shacabka.
Alle ha u naxariistee, Marxuumka dhintay dadka yaqaanaa waxay ku tilmaamaan siyaasi wadani ah, oo aad ugu wanaagsanaa diinta. Xildhibaan Cali Geneey ayaa sheegay inuu Xildhibaannada uu kula talin jiray iney danta guud eegaan, oo aan lagu milmin siyaasad ku saleysan dan gaar ah. Marxuumka waxaa lagu wadaa in berri lagu aaso Muqdisho.